Lifana nelifile ihhovisi labantu abasha kumasipala i-Ray Nkonyeni | Eyethu News
WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 45 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 45 mins ago
Lifana nelifile ihhovisi labantu abasha kumasipala i-Ray Nkonyeni
“Babonakala ezithombeni zofacebook bengcebeleka ngesikhathi somsebenzi”
BANGCEBELEKILE: Abaphathi behhovisi labantu abasha laseRay Nkonyeni UNqobile Cele benoPhumlani Mzobe bezingcebelekele Isithombe: Facebook
KUTHANDA ukunuka ukusha ehhovisi labantu abasha (Youth Office) lakumasipala iRay Nkonyeni eliphethwe nguPhumlani Mzobe kanye noNqobile Cele njengoba sekube nenqwaba yezikhalazo zokuthi lifana nelifile.
Abasebenzi balelihhovisi kuthiwa bahlala bengekho kukhala ibhungane. Uma abantu befika bezofuna usizo kuthiwa bavele basizwe ngunogada wesifazane naye osuke engenalwazi kahle ngokuthile.
Abantu abasha abazifikele mathupa lapha emahhovisi abangafunanga kudalulwe amagama abo bathi into abayibonayo ngumphathi walelihhovisi kanye nozakwabo bepitshoza ezinkundleni zokuxhumana, lokho osekubadida njengalokhu becabanga ukuthi babekelwa ukusiza umphakathi hhayi ukuzithanda kofacebook.
Abasebenzi abathathu iphephandaba elinawo amagama abo yibona laba okuthiwa balibele ukuzithanda.
“Kwesinye isikhathi uke ufone ungatholi muntu ehhovisi, uthi uma uziyela wena ufice unogada elokhe ecula ingoma ethi angazi noma abekho,” kusho lomthombo.
Sekuneminyaka abantu bakwezinye izindawo bekhononda ngokuthi lelihhovisi alibasizi.
Ngisho umphakathi waKwaNzimakwe sewake wazwakalisa ukukhononda ngalelihhovisi uthi awulisizi ngalutho.
“Lombhemu ubhizi nalento yakhe yePhumlani M Foundation nayo ongazi noma yiyona yini le ayiqashelwa umkhandlu”. kusho ilunga lomphakathi.
“Imalini ekhishwa umasipala yehhovisi labantu abasha, ngaphandle kokukhishwa kwemifundaze kameya, iYouth summit intoni enye, akukho esikwaziyo noma esikubonayo ngaphandle kwalento yakhe nokumodela kwezingane,” kusabeka lomthombo.
Omunye umthombo uthi sekuke kwabakhona uphenyo kulelihhovisi lokuthi azikho yini izimali eziphuma kulomkhandlu ziye kulefoundation yakhe.
Kuthiwa ngisho neqembu lezepolitiki elibusayo selike lambiza lahlala naye phansi ebuzwa ukuthi yini umsebenzi wakhe uma ehlulwa ukusebenzela umphakathi ikakhulukazi abantu abasha.
Kanti nabaphathi bamasipala kuthiwa sebeke bambiza waze wasayiniswa nencwadi thizeni.
Uphiko lwentsha i-ANCYL ithi isizitholile nayo lezizikhalazo. UTeddy Hlophe okhulumela loluphiko uthe kusukela ngonyaka odlule bazitholile izikhalazo ezithi leliyahhovisi lifana nento yokudlalela.
“Lokhu kusikhathaza kakhulu ngoba abasebenzi bakhona bafana nabantu abeza emsebenzini ngoba bezokweba imali kahulumeni,” kusho uHlophe.
Uphethe ngokuthi bona njenge-ANCYL kuzofanele bangenelele kuthi uma labo abanikezwe lomsebenzi bengasazimisele kuyomele babadele kungene abantu abasanetshisekelo yokusebenzela intsha.
USimon April okhulumela umasipala uthe loludaba lusabhekwa ngaphakathi bayokhipha isitatimende uma selufike emaphethelweni.
‘Obezama ukuduna imoto ugwazwe ngombese wakhe’
Basinde kukubi iloli likhalakathela endlini eCopesville
Baqhakambisa umlando welokishi iMbali
Kukhuthazwa intsha ukuthi ilwe nobugebengu
Kuzothatha amasonto amabili ukuhlanza emva kwezikhukhula
Abafundi banikelele ikhaya labantwana e-Edendale
Isithombe esibaziweyo sika O R Tambo
Kuyaqhubeka ukufunda KwaMncane High
Babhikishele ukubanjiswa udonga KwaDindi
Abasadingeki abadayisi basemgwaqeni
Sebejikelene ababekwe icala lokubulala, omunye ukhomba omunye
Liqophe i-video iqembu lomculo we-Hip Hop eMgungundlovu
Uma useMlazi maningi amathuba okulinyazwa oshayela imoto edakiwe – uphenyo
Ubandlululo alunayo indawo kulelizwe- Nobhala we-ANC